'पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्पको जोखिम' - BBC News नेपाली
'पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्पको जोखिम'
रेबेक्का मोरेल विज्ञान संवाददाता, बीबीसी न्युज
6 अगस्ट 2015
Image caption गत वैशाखमा आएको भूकम्पले जनधनको ठूलो क्षति गरेको थियो
नेचर एण्ड साइन्स नामक जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक लेखमा वैज्ञानिकहरुले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
तर उनीहरुले उक्त भूकम्प कुन परिमाणको हुनेछ र कहिले आउनेछ भनेर चाहिँ भन्न नसकिने बताए।
हामी मानिसहरुलाई तर्साउन चाहँदैनौं, तर आफूहरु बसिरहेको ठाउँमुनि अत्यन्तै धेरै तनाव सञ्चित भईरहेको छ भन्नेबारे उनीहरु सचेत रहन अत्यन्तै आवश्यक छ
प्रा. जँ फिलिप अवुआक, क्याम्ब्रीज विश्वविद्यालय
गत वैशाखको भूकम्प भारतीय प्लेट र युरोसियन प्लेट भनिने दुइ भौगर्भिक क्षेत्रहरुबीच घर्षण हुँदा पैदा भएको हो।
यो निरन्तर भइरहने प्रक्रिया हो जहाँ हरेक वर्ष जमीन दुइ सेन्टिमीटरले उत्तरतिर सरिरहेको हुन्छ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार गत बैशाख १२ मा गएको भूकम्पले पृथ्वीमुनि सञ्चित तनावमध्ये केहीमात्रै सतह बाहिर निकालेको थियो।
प्राध्यापक अवुआकले भने, “यदि सो भुइँचालोले हिमालयको अघिल्तिरसम्मको भूभागमा चिरा पारेको भए अझ ठूलो भूकम्प आउन सक्थ्यो।“
पश्चिम नेपाल तथा उत्तरी भारतको समथर इलाकाका स्कूले छात्रछात्रहरुलाई भूकम्प आउँदा कसरी सुरक्षित रहने भन्ने सिकाएर तथा विद्यालय भवनहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाएर कैयौं ज्यान जोगाउन सकिनेछ
प्रा. डेभिड रथरी, ओपन युनिभर्सिटी, युके
हिमालयक्षेत्रमा सन् १५०५ मा ८.५ परिमाणको महाभूकम्प आएको थियो।
हालै त्यता सरेको दबाबले गएको पाँचसय वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यहाँ जम्मा भईरहेको तनावमाथि थप दबाब थप्न सक्ने उनीहरु बताउँछन्।
“अहिले हामी पश्चिम नेपालका बारे निकै चिन्तित छौं,” प्राध्यापक अवुआकले भने।
उनले नेतृत्व गरेको टोलीले त्यस क्षेत्रमा अरु बढी अनुगमन गर्नुपर्ने जनाएको छ, यद्यपि अर्को प्राकृतिक विपद् ठिक कहिले आउनेछ भनेर अनुमान गर्नु असंभव नै छ।
“हामी मानिसहरुलाई तर्साउन चाहँदैनौं, तर आफुहरु बसिरहेको ठाउँमुनि अत्यन्तै धेरै तनाव सञ्चित भईरहेको छ भन्नेबारे उनीहरु सचेत रहन अत्यन्तै आवश्यक छ,” प्राध्यापक अवुआकले भने।
उनले ठूला भूकम्पहरु पनि थेग्नसक्ने ससाना घरहरु निर्माण गर्न सुझाव दिए।